रोकिएला है तपाईंको बैंक खातामा भएको पैसा !
२०७६ श्रावण २९ बुधबार ०८:४५:००
तपाईंले बैंक खाता खोलेर लामो समय नचलाई बस्नुभएको त छैन ? त्यसो भए तत्काल नै गएर सक्रिय पार्नुहोस् । ६ महिनासम्म बैंक खातामार्फत कारोबार नगरेमा खाता निष्क्रिय हुने गर्दछ । निष्क्रिय खातामा अन्यत्रबाट पैसा जम्मा गर्न तथा रकमान्तर गर्नसमेत मिल्दैन ।
प्राधिकरणले आफ्नो बैंक खाता सक्रिय गरी खातामा जम्मा भएको रकम निकालेर निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गर्न लाभग्राहीसँग आग्रह पनि गरेको छ । प्राधिकरणले समयमै खाता सक्रिय नगर्नेहरूको हकमा प्राधिकरणले खाता निस्क्रिय पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।